कोलोराडो आलु कीरा लार्वा। कोलोराडो आलु कीरा नियन्त्रण
Homeliness, किरा नियन्त्रण
सबै नीरस कीरा को जन्म ठाउ मेक्सिकन प्रान्त हो। कोलोराडो आलु कीरा: उहाँले कोलोराडो को आलु क्षेत्रहरू नष्ट गरेपछि, यसलाई यसरी भनिन्थ्यो। खुशी र अन्य Solanaceae, टमाटर, बैगुन र मरिच सहित यसलाई मा लार्वा फिड।
को किरा बारेमा सानो
समसामयिक hoeing र हटाउने सामा थियो आलु संग लगाए साइट लागि छोडेर अघि। अब, बाली काट्ने लागि मुख्य लडाई को विना अधिकार घुस्ने व्यक्ति नष्ट गर्न छ। वसन्त मा, बित्तिकै माटो तापमान 12-15 डिग्री पुग्यो रूपमा, beetles 20-30 सेन्टीमिटरको गहिराइमा देखि सतह मा चयन गरिएका छन्। यस गर्मी समयमा, आलु को पात को underside अन्डा देखिन्छन्। एक हप्ता पछि तिनीहरूले परिणत लार्वा। को जीव कोलोराडो आलु कीरा (फोटो तल हेर्नुहोस्।) - एक निष्ठुर र voracious किरा।
छोटो समयमा एक आलु क्षेत्र खुला stems एकान्त स्थानमा गर्न सक्नुहुन्छ। एक महिना पछि, एउटा वयस्क कीराहरूको मा जीव। को गर्मी एक हट, किरा धेरै पुस्ताका बढ्न समय थियो भने।
धेरै वर्ष को लागि, किरा को hordes टमाटर, आलु रोपण को अपरिपक्व बिरुवा, साथै खुर्सानी र बैगुन आक्रमण। मानिसजातिको troublesome छिमेकीलाई सामना थुप्रै तरिकामा आविष्कार। धेरै खतरनाक कोलोराडो आलु कीरा: लार्वा अक्सर पूर्ण किसान रोपण नष्ट। त्यसैले, यो साइटबाट किरा धपाउने महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ कोलोराडो आलु कीरा लार्वा मार्न कसरी चार आधारभूत विधिहरू छन्। सबैभन्दा समय तरिका खपत - यांत्रिक। उहाँले समय समयमा सङ्कलन र त्रुटिहरू, आफ्नो अन्डा र लार्वा नष्ट गर्न छ। यसरी मात्र आलु को एक सानो रोपण साफ गर्न सकिन्छ। धेरै हेक्टरमा क्षेत्रमा छैन शारीरिक प्रक्रिया गर्न सक्षम छ।
निम्न विधि - जैविक - कीरा, चरा र सूक्ष्मजीवहरु को प्रयोग पनि समावेश छ। पूर्ण अहानिकारक र होनहार। Agronomy तरिका - क्रप परिक्रमा, उच्च गुणस्तरीय विविधता चयन, कीरा "कुनै मनपर्ने", सुधार र बिरुवाहरु को विकास छ। अझै किरा मा प्रभाव एक रासायनिक विधि छ।
यांत्रिक विधिहरू प्रयोग
मेरो घरेलु घरमा आलु संग सानो बेड नियमित निरीक्षण, सङ्कलन जाडो किरा पछि देखा परे। तपाईं चारा एक प्रकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। वसन्त, साथै पोस्ट-बाली dropwise जमीन डिब्बे संग नै स्तर मा। तिनीहरूले आलु, प्रशोधन hlorofosom को टुक्रा बाहिर राखे। Beetles बैंक र हत्या भित्र क्रल। हामी विभिन्न स्थानहरू बगैचा मा मुट्ठी cleanings विस्तार भने, तिनीहरूले कीराहरू को एक ठूलो संख्या जाँदैछन्। यो आफ्नो इन्धन खन्याउनु र समाधान बाल्न रहनेछ।
आलु स्प्राउट्स को किरा को उपस्थिति पछि उदाहरण स्ट्रोक लागि, एक जार मा संकलित थिए। मनसायलाई पात तल निरीक्षण गर्न अनुगमन। नष्ट oviposition समय - लार्वा हजारौं। कसरी कोलोराडो आलु कीरा लार्वा को छुटकारा प्राप्त गर्न? पानी संग व्यापक कन्टेनर मा झाडी बन्द मिलाउ तिनीहरूलाई मनपरेको, त्यसैले तिनीहरू फैलाउन छैन।
Biologically सक्रिय एजेन्ट मूलतः ब्याकटेरिया, जो, वयस्क कीराहरू र लार्वा मा उपयुक्त प्रक्रिया पतनपछि। Intensively प्रजनन, तिनीहरूले कोलोराडो आलु कीरा को लार्वा मा प्रभाव हानिकारक। तिनीहरूलाई विरुद्ध लडाई एक हप्ताको एक अन्तराल संग उत्पादनहरु प्रति सिजन धेरै पटक स्प्रे छ। जैविक समाधान अन्य जीवित प्राणीहरू लागि हानिकारक छैन। तिनीहरूले भूमि र हावा प्रदूषित छैन। लार्वा र beetles हरेक reappeared पार्टी स्प्रे गर्न आवश्यकता - यो बेफाइदा।
लडाई मा सहयोगीहरूले एक निश्चित जात कुखुरा र गिनी fowl हुन सक्छ। आलु पात र किरा चरा को गन्ध आफ्नो खाना मा मिश्रण, बिस्तारै सिकाउनुभयो छन्। हुर्किसकेका कुखुरा र गिनी fowl एक आलु क्षेत्र उत्पादन। कि गर्नु अघि, चरा खुवाउनुभयो छैन। आलु संक्रमित लार्वा pecked को hens गर्न प्रक्रिया गर्न सकिँदैन।
को किरा विरुद्ध आलु को एकदम प्रतिरोधी प्रजातिहरू वर्तमान छैन तापनि beetles केही प्रकार यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। त्यसैले, यो नै ग्रेड वर्ष वर्ष देखि रोपेर छैन आवश्यक छ। Graded सामाग्री अपडेट गर्नुपर्छ। यसलाई सकेसम्म चाँडो र पहिले नै स्प्राउट्स संग बोट आलु गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसपछि समय आलु सबै भन्दा माथि को लार्वा वृद्धि जानेछ, र बलियो प्राप्त हुनेछ।
कोलोराडो आलु कीरा को लार्वा सामना गर्न कसरी प्रश्न, लामो समय agronomists excites। प्रभावकारी मात्र आलु स्प्राउट्स देखा hilling। यो प्रविधी 50% भन्दा को अन्डा को संख्या कम गर्छ। पङ्क्तिहरू बीच माटो loosening pupae को एक निश्चित संख्या नष्ट, गएका
विकास को अर्को चरण को लागि चरण। बाली को भन्दा माथि घास काटन र नष्ट अघि एक हप्ता हुन सक्छ। को जाडो लागि तयारी समयमा त्यसपछि beetles खाना को deprived छन् तिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण छ। गहिरो खनाइ वा पाराले जोतेर लेट शरद ऋतु मा बाहिर छ। त्यसपछि चरा wintering माटो सतह मा हुन र चिसो संग मर्नेछन् लागि प्रस्थान। अर्को वर्ष मा एक खतरा यस्तो घटनाहरू धन्यवाद धेरै सानो हुनेछ।
रसायन द्वारा विधिहरू जोखिम
रसायन धेरै माली द्वारा प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक सिजन संग, परिचित र सिद्ध उपकरण संग, नयाँ देखिन्छन्। कहिलेकाहीं यो आफ्नो प्रशस्त मात्रामा बुझ्न गाह्रो छ। विशेष गरी त्यहाँ गर्दा एकै समयमा सुरक्षित, सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम फेला पार्न इच्छा छ। यो कोलोराडो आलु कीरा को voracious लार्वा रूपमा चिनिन्छ। फोटो वृक्षारोपण आफु को लागि कुरा नाश। तयारी सम्पर्क र systemic कार्य हो। यो एक संयुक्त उपकरण चयन गर्न राम्रो छ। सम्पर्क कीटनाशक को किरा मा झर्ने काम। तिनीहरू धोएका छन्, र वर्षा आवश्यक पुन उपचार पछि। जहाँ तपाईं एक समाधान पायो छैन ठाउँमा, beetles बुश नष्ट जारी। Systemic लागूपदार्थ को भन्दा माथि मा जम्मा र एक लामो समय को लागि त्यहाँ बाँकी छन्।
गर्न beetles विष गर्न accustomed छैन, उपचार सुविधा समय समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
को प्रयोग सबैभन्दा सामान्यतः लागूपदार्थ
एक वा अन्य विषाक्त रसायन प्रयोग गरेर तपाईं स्पष्ट निर्देशन पालना गर्न आवश्यक छ। तपाईं बाँकी रकम लागू गर्न सक्दैन। यो अमूर्त कीटनाशक सक्रिय सामाग्री मा डाटा हुनुपर्छ। नाम द्वारा विभिन्न लागूऔषधको संरचना अक्सर एउटै सक्रिय संघटक समावेश छ। imidacloprid - यस्तो "प्रेस्टिज", "konfidor" "Zhukomor" "Ratibor" को रूपमा आधार systemic दबाइहरु। तर thiamethoxam - सक्रिय पदार्थ अर्थ "Enzhio", "डाक्टर", "अख्तर"।
विशेष गरी माग दबाइ "प्रेस्टिज" मा। Tubers रोपण अघि उपचार। सक्रिय पदार्थ उभरते मार द्वारा उठाएको छ।
आलु निर्दिष्ट अवधि पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै पक्ष बाट tubers सम्हाल्न धेरै सुविधाजनक छैन। तर बाली जस्तै कोलोराडो आलु कीरा रूपमा किरा को छिडकाव आवश्यक छैन। लार्वा पछि देखा, र tubers गठन थिए किनभने तिनीहरू महत्वपूर्ण क्षति गर्न सक्दैन।
कोलोराडो आलु कीरा लार्वा लागि लोक उपचार धेरै विविध र लगभग सधैं हानिरहित छन्। आलु रोपण टार को समाधान स्प्रे गर्न सिफारिस गरिएको छ। पानी को 10 लिटर सन्टी टार को 100 ग्राम संग पतला मा।
व्यापक साबुन खरानी समाधान प्रयोग। को खरानी 15 मिनेट refluxed थियो। 10 लिटर साबुन को 50 G थप्न आवश्यक छ। प्लान्ट पात ड्राई खरानी, मकैको पिठो वा सिमेन्ट धुलो संग छर्कियो गर्न सकिन्छ। पीठो वा पेट किरा beetles मा सिमेन्ट सुनिनु आफ्नो संख्या कम, मर्छन्।
सुर्ती मा निहित निकोटिनले beetles मा हानिकारक प्रभाव बर्बाद। फिल्टर जलसेक + 40 साबुन को G प्रयोग गर्नुहोस्। यो गर्न, कच्चा को चिसो पानी 500 ग्राम 10 लिटर दुई दिनको लागि जिद्दी।
Sprayed ब्रश जलसेक निम्न: ताजा पात र हरियो ओखर फल गोले उम्लिरहेको पानी 300 G बाल्टिन हालिएको छ को2किलो। को जलसेक गिरावट देखि तयार र अर्को सिजन सम्म राखिएको छ।
हामी जडीबुटी को decoctions प्रयोग
broths र औषधीय बिरुवाहरु को अर्क संग तुरुन्तै उपचार पछि कोलोराडो आलु कीरा जीव जस्तो देखिन्छ हेर्न गर्नुपर्छ। यो आफ्नो कार्यहरू आकलन गर्न र तरकारी कच्चा माल को आवश्यक रकम निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ।
यस नुस्खा छ: wormwood, ग्लास खरानी को 250 ग्राम र पानी उम्लिरहेको 10 लिटर।3घण्टा जलसेक लागि Infuse कार्यका लागि तयार छ।
डेन्डेलिओन र लिने horsetail 250 ग्राम, पानी को 10 लिटर 15 मिनेट को लागि जोश। समाधान फिल्टर थियो। Decoction केंद्रित प्राप्त। त्यसैले, पानी को प्रत्येक लिएको लीटर बाल्टिन पतला।
100 G elecampane मूल पानी उम्लिरहेको zaparivayut। जनसंचार infusions र सुन्दर पछि, स्प्रे एक महिना तीन पटक। तपाईं पनि घाँस सैलंडन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पानी को 10 लिटर मा आधा-लीटर जार: समाधान यो गणना देखि पतला छ।
पानी को एक बाल्टिन रातो तातो खुर्सानी को 100 ग्राम धक्का। grated साबुन दुई टुक्रा थप्नुहोस्। को जलसेक प्रशोधनका लागि तयार छ।
टमाटर केहि विषालु tops। कच्चा माल को4किलो 40 मिनेट 10 लिटर मा उसिनेर छ। शोरबा 2:10 को एक अनुपात मा पानी संग पतला गर्नुपर्छ। संयंत्र 50 G shabby साबुन राम्रो आसंजन लागि।
केही रोचक चाल
प्रश्न के विष कोलोराडो आलु कीरा लार्वा बारेमा खडा गर्दा, कुनै हानि किरा Smells संवेदनशील छन् भनेर थाहा हुनेछ। बलियो गन्ध संग आलु बिरुवाहरु को लगाए वा परिधि भाग पङ्क्तिको बीच तिनीहरूलाई तर्साउन गर्न सक्नुहुन्छ। मा 100% आश्वासन त्यहाँ अनावश्यक अतिथि को छुटकारा रही, तर तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो marigold, कैलेंडुला, रूपमा रोपण फूल, जंगली सुनगाभा, nasturtium। साथै, सौंफ, लसुन, borage, सिमी, सिमी।
प्याज र बोक्रा, पाइन र सन्टी sawdust rotting राखे पंक्ति बीच नै उद्देश्य को लागि। एक किरा नियन्त्रण र नाइट्रोजन संग बिरुवाहरु fertilizing - यूरिया क्रप प्रक्रिया डबल फाइदा पैदावार। बाली पछि डिस्पोजेबल उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र चिकन मल को 4% समाधान छ।
यो कीरा सिट्रस को गन्ध खडा गर्न सक्दैन भनेर तर्क। जाडो आवरण लागि सुकेको को आलु ब्रश बीच समाधान गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ किरा देखि बिरुवाहरु को सुरक्षा को लागि विभिन्न उपकरण धेरै छन्। तिनीहरूले विशेषता स्टोर र बजारमा बेचिन्छन्। Enterprising व्यापारीहरू रेल जहाँ धेरै माली आफ्नो सामान बेच्न। अब कोलोराडो आलु कीरा (लार्वा, विशेष) विभिन्न विषाक्त रसायन गर्न प्रतिरोधी बनेका छन्। मात्र विशेष आउटलेटहरू मा जरूरी हालतमा प्राप्त। सामान प्रयोगको लागि विस्तृत निर्देशनहरू, मूल प्याकेजिङ्ग र उपयुक्त लेखिएको छ प्रमाणित हुनुपर्छ।
काममा व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय रबर पन्जा, gauze पट्टी, चश्मा भूल छैन पालना गर्नुपर्छ। छिडकाव लागि विशेष उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ। निर्देशन को सख्त उत्सव संग लागूपदार्थ पतला। काम गर्मी छैन र हावा को अभाव मा, बिहान वा साँझ पूरा गर्न आवश्यक थियो।
किरा विरुद्ध लडाई जैविक विधि प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, हामी आफ्नै स्वास्थ्य र सुरक्षा बारे बिर्सनु हुँदैन। र राम्रो फसल तपाईं मात्र आनन्द ल्याउँछ गरौं!
को पशुको चाक मा mol: कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न? लड्न र अनाज को भण्डारण गर्न सुझाव
कुकुर को सुरक्षा: तरिका
गोभी किरा र आफ्नो नियन्त्रण। तपाईं यसको बारेमा जान्नु आवश्यक छ के
ध्यान दिएर, किरा! सडक मा midges द्वारा केले मदत गर्न सक्छ?
अङ्गुर पैसाबारे: नियन्त्रण विधिहरू
मशरूम संग Meatless सलाद: द्रुत, हार्दिक, स्वादिष्ट!
लाडा प्रोरा स्पोर्ट - खेलकुद, र केवल
Payday: हीड - खेल को बारे मा जानकारी
सैन्य आधार। विदेश रूसी सैन्य आधारमा
ड्रागन र कुकुर: अनुकूलता पूर्वी Horoscope र सम्बन्ध को संभावनाहरु
ध्वनिक उत्सर्जन पाइपिंग
बिजुली "सपना"4ओवन संग hotplates: वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा
सजावटी मश - सबैभन्दा unpretentious बोट
हेटेरोसेक्सुअल एक साधारण व्यक्ति वा अतीत को एक अवशेष हो?